May 24, 2020 - Lupyo News
May 24, 2020 by Lupyo News
လူငယ်စုံတွဲ ဟိုတယ် အခန်းထဲက တစ်ပတ်လုံး အပြင်မထွက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တစ်လုံး မှာ စုံတွဲတစ်တွဲ အခန်းငှားတည်းခိုခဲ့ပြီး ၇ ရက် တစ်ပတ်လုံးလုံး အခန်းထဲက ထွက်လာတာမတွေ့ရတဲ့အတွက် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများနဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကပါ မသင်္ကာဖြစ်လာပြီး အခန်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊အားလုံး အံ့အားသင့် ဒေါသထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် ပစ္စည်း ပို့သမားယောင်ဆောင်ကာ အခန်းတံခါးကို သွားခေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အခန်းတံခါး ဟရုံလေးဖွင့်လာပါတယ်။တံခါးဟနေတဲ့ ကြားကနေ အခန်းထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ထိတ်လန့်အံ့အားသင့်စရာ မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဟိုတယ်အခန်း နေရာအနှံ့မှာ စားကြွင်း စားကျန်များ အမှိုက်များ ပြန့်ကျဲပြီး စည်းကမ်းမဲ့ ပစ်ထားတာကြောင့် အနံ့တွေက မကောင်းတော့သလို အခန်းထဲက အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအချို့လည်း ဖျက်ဆီးခံထားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်က ချက်ခြင်း ရဲစခန်းကို ဖုန်ဆက် … Read more
အမြန်လမ်းမှာ မေပန်းချီ “သရဲတက်ခွ” ခံလိုက်ရတဲ့ video ရုပ်သံ
အမြန်လမ်းမှာ “သရဲတက်ခွ” ခံလိုက်ရတဲ့ မေပန်းချီ ..VIDEO (ရုပ်သံ) အမြန်လမ်းမှာ မေပန်းချီ “သရဲတက်ခွ” ခံလိုက်ရတဲ့ video ရုပ်သံ မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင်ကနေ သီချင်းဆိုတော့မှာလား မေးရလောက်အောင် အဆိုကောင်းသူ မေပန်းချီပါ။ မေပန်းချီဆိုဆို မော်ဒယ်လည်းလုပ် သရုပ်ဆောင်လည်းလုပ်တဲ့ မိန်းမချောလေးပါ။ လှပတောင့်တင်းတဲ့ ကိုယ်ခန္တာကြောင့် ပုရိသတွေ အရမ်းရင်ခုန်ကာ အားပေးခြင်းခံရတဲ့ သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ဂျင်းဘောင်းဘီ ဂျာကင် ဂျင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးဖွင့်ထားပြီး အနုပညာလောကာထဲမှာ ခြေလှမ်းသွက်သွက်နဲ့ လျှောက်လှမ်းလို့နေသူပါ။ ခုခါမှာတော့ သရဲတက်ခွတာခံရတဲ့ကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ရုပ်သံလေးပါနားထောင်ကြည့်နော်.. အောက်ဆုံးမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်…. —————————— Unicode Version မျောဒယျ သရုပျဆောငျကနေ သီခငျြးဆိုတော့မှာလား မေးရလောကျအောငျ အဆိုကောငျးသူ မပေနျးခြီပါ။ မပေနျးခြီဆိုဆို မျောဒယျလညျးလုပျ သရုပျဆောငျလညျးလုပျတဲ့ … Read more
တည်မြဲတဲ့ RS တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင် … ဒါလေးတွေ သိထားဖို့လိုမယ်နော်
တည်မြဲတဲ့ RS တစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင် … ဒါလေးတွေ သိထားဖို့လိုမယ်နော် 1. နားလည်မှု ယုံကြည်မှု သစ္စာရှိမှုတွေဟာ အဓိကအချက်ပေါ့ … ။ 2. လျှို့ဝှက်ချက်တွေ မထားပဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုပါ … ။ 3. အခက်အခဲတွေကို အတူဖြေရှင်းပါ … ။ 4. မအားဘူးလို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ခဏခဏပစ်မထားပါနဲ့. … ။ 5. လူအများကြား မအော်ပါနဲ့. … ။ 6. အမှတ်တရနေ့ရက်တွေကို အမြဲအမှတ်ရပါစေ. … ။ 7. အချိန်ရရင်ရသလို ပျော်စရာတွေကို ဖန်တီးပါ … ။ 8. ဟာသတွေလေးနှောလို့ ရယ်စရာလေးတွေပြောပေးပါ. … ။ 9. အားရင်အားသလို အမြဲအဆက်အသွယ်လုပ်ပါ. … … Read more
အသက်၃၀ အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ (မဖြစ်မနေ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါနော်)
အသက်၃၀ အရွယ်မှာ စတင်ရမယ့် အရာများ (မဖြစ်မနေ ဖတ်ကြည့် လိုက်ပါနော်) အသက် ၃၀+ ဆိုတာ ဘဝရဲ့ငါးပုံ နှစ်ပုံခန့်ကို ဖြတ်သန်းပြီးစ အရွယ်ဖြစ် ပါတယ် ။ နုပျိုမှုနဲ့ဘဝ အတွေ့အကြုံ ဉာဏ်ပညာ ရင့်ကျက်မှု သမမျှတ တဲ့ အရွယ်ပါ။ ဒီအရွယ်မှာ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် ၁၉ ချက်ကို ၃၀ ပြည့်စ၊ ကျော်စ သူငယ်ချင်းတွေ ဖတ်ဖို့ ပါ။ ၁။ ဆေးလိပ် မသောက် ပါနဲ့။ ဆေးလိပ်သောက်တတ် သူဆို ရင်လည်း ချက်ချင်းဖြတ် ဖို့ကြိုးစား ပါ။ ပိုက်ဆံ ကုန်တယ်၊ အနံ့ဆိုး တယ်၊ ရောဂါရဖို့ ၁၀၀%နှုန်းပြည့် သေချာ တယ်။ ဆေးလိပ်သောက် တာကို ခုပဲ … Read more
ချိုင်းမည်းနေတာကို ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်လိုက်သလို ပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၄)မျိုး …
ချိုင်းမည်းနေတာကို ခဲဖျက်နဲ့ ဖျက်လိုက်သလို ပျောက်ကင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၄)မျိုး ချိုင်းချွေးနံ့သက်သာအောင် Roll on သုံးတာက ပြဿနာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်အသားအရေနဲ့ ဓာတ်မတည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ချွေးနံ့ပျောက်ဆေးနဲ့ရေရှည်ထိတွေ့မှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ချိုင်းနေရာမှာ မည်းလာပြီး နဂိုအသားအရေလိုပြန်ဖြစ်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ချိုင်းမည်းတာကို အိမ်မှာတင်ပြန်ပြုပြင်ဖို့ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းလမ်း (၁) ပန်းသီးရှာလကာရည်နှစ်ဇွန်း၊ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှစ်ဇွန်း ဆတူရောပြီး ချိုင်းမှာ လိမ်းပေးကာခြောက်သည်အထိ ထားပေးကာ ရေပြပန်ဆေးချပေးလိုက်ပါ။ တစ်ပတ်မှာ ၃ကြိမ် လုပ်ပေးသွားရုံနဲ့ တစ်လလောက်ကြာရင် နဂိုအသားအရောင်အတိုင်းပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ နည်းလမ်း (၂) နွားနို့တစ်ဇွန်း၊ နနွင်းတစ်ဇွန်း၊ ပျားရည်တစ်ဇွန်းတို့ကိုရောမွှေပြီး ချိုင်းမှာ ထူထူလေးလိမ်းပေးကာ ခြောက်တဲ့အထိ ထားပြီး ရေပြန်ဆေးချပေးပါ။ တစ်ပတ်နှစ်ကြိမ်၊ တစ်လလောက် လုပ်ပေးရင် ချိုင်းပြန်ဖြူလာမှာပါ။ နည်းလမ်း (၃) သကြား … Read more
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့်မြေနေရာအကျယ်ကြီးကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းသို့လှူဒါန်း… ဒီပုံလေးကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်ထဲက ဒေသတစ်ခုမှာလို့ ထင်မှတ်မှားစရာပါ။နေရာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ချစ်တကောင်းတိုင်းဒေသအတွင်းရှိ ဘန်ဒါဘန်ခရိုင် မှာဖြစ်ပါသတဲ့။ အဆိုပါဒေသရဲ့ မြေပိုင်ရှင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာမာဘူဘာရဲ့ အလှူပွဲတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါဒေသရှိ မိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာတစ်ခုအတွက် မြေနေရာအကျယ်ကြီးတစ်နေရာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းထံပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သလို ပုံပါ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးတစ်ဆူကိုလည်း ထုလုပ်ပူဇော်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ဒီပုံလေးကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်ထဲက ဒေသတစ်ခုမှာလို့ ထင်မှတ်မှားစရာပါ။နေရာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ချစ်တကောင်းတိုင်းဒေသအတွင်းရှိ ဘန်ဒါဘန်ခရိုင် မှာဖြစ်ပါသတဲ့။ အဆိုပါဒေသရဲ့ မြေပိုင်ရှင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာမာဘူဘာရဲ့ အလှူပွဲတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါဒေသရှိ မိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာတစ်ခုအတွက် မြေနေရာအကျယ်ကြီးတစ်နေရာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းထံပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သလို ပုံပါ … Read more
အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ။ ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းကလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံး ကျနေပြီ… ချစ်သူရည်းစားနဲ့ Living Together ကိစ္စ ချစ်သူ ရည်းစားတွေ တွဲလာတာ ကြာလာတဲ့ အပြင် တယောက် အကြောင်း တယောက် သိပြီး ( Living Together )လင်မယားလို ဖြစ်နေရင်တော့ လက်ထပ်လိုက် ကြတာ အကောင်းဆုံးပါ ။ အချိန်တွေ ဘာတွေ ဆွဲပြီး တွဲနေရင်တော့ကောင်လေးဘက်က မနစ်နာပေမယ့် ကောင်မလေး ဘက်က အရမ်းကို နစ်နာတယ် ။ အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ။ ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ မိန်းခလေးတွေဆို လက်ဆုပ် လက်ကိုင် ပြစရာ ယောက်ျားသာ မရှိတာအိမ်ထောင်သည် မိန်းမကြီးတွေနဲ့ တူပြီး … Read more
မြောက်ဥက္ကလာစခန်းက လက်မြောက်ထားတဲ့ လူရမ်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပတ်ရမ်းနေတဲ့ ရုပ်သံ
မြောက်ဥက္ကလာစခန်းက လက်မြောက်ထားတဲ့ လူရမ်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပတ်ရမ်းနေတဲ့ ရုပ်သံ အမေကတိုက်ပိုင်ရှင် သားကငမူး အမြဲသောက်ပြီးရူးနေတဲ့ကောင် သူတို့မြေညီထပ်မှာဌားတဲ့ Beauty Saloon လဲဆိုင်ဖွင့်တဲ့ချိန်ဆို ဆိုင်ထဲထိ အတွင်းခံပဲဝတ်ပြီး ရည်းစားစကားပြောလို့ပြော မိုက်ကြေးခွဲလို့ခွဲ ဆိုင်လာတဲ့ကာစတမ်မာဆိုလဲရိုက်လွှတ် ရဲစခန်းတိုင်လဲ တပတ်နဲ့ပြန်ပြန်ထွက်လာလို့ နောက်ဆုံးသူဒဏ်မခံနိုင်လို့ ၃ လနဲ့ဌားခအဆုံးခံပြီးပြေးခဲ့ရတယ်။ အပေါ်အခန်းဌားနေတဲ့ သင်္ဘောသားမိန်းမလဲ ယောကျာ်းသင်္ဘောတတ်တဲ့ချိန်ဆို ညဘက်အခန်းခိုးခိုးဝင်ဖို့လုပ်လို့ ပြောင်းပြေးရတယ်။ ဆေးကျောင်းရှေ့မို့ ဆေးကျောင်းကကလေးတွေ ခဲနဲ့ထု ပိုက်ဆံတောင်း ပြသာနာရှာလို့ ကလေးတွေ ရဲစခန်းသွားအမှုဖွင့်လဲဘာမှ့မထူးပါဘူးတဲ့။ ဒီနေ့တော့ ဘေးဆိုင်ငွေင်္ဒဂါးကမခံနိုင်တော့ ရဲမတိုင်တော့ပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲလုပ်တော့ ကွဲကျပြဲကျပေါ့။ ဒီလိုမျိုးတွေ ကျနော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာ အများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆို တနေ့ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ခင်များတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တကယ့်ကိုတရားဉပဒေစိုးမိုးဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ တာဝန်ရှိသူများသိစေရန် ခေမာသီလမ်း​၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဆေး၂​ရှေ့ /မူရင်း … Read more
ခုေ ခတ် မြန်မာ မိန်းကလေး အ များစု ဘာကြောင့် ဘဝပျက်သွား ခဲ့ရ သလဲ ဆို တာ သိေ စ ချင် လို့ ပါ အားလုံး သိေ အာင် လည်း မျှေ ၀ေ ပးပါ
ခုေ ခတ် မြန်မာ မိန်းကလေး အ များစု ဘာကြောင့် ဘဝပျက်သွား ခဲ့ရ သလဲ ဆို တာ သိေ စ ချင် လို့ ပါ အားလုံး သိေ အာင် လည်း မျှေ ၀ေ ပးပါ အ စဆုံးဖတ်ပြီး နှမချင်း ကိုယ်ချင်းစာတယ်ဆိုရင် မျှဝေပေးပါ “ဟင့်အင်း မောင်” မလိုက်လျော ပါရစေနဲ့ ”မောင်” ချစ်ကလည်းကွာ….”မောင်က ချစ်ကို တကယ်ချစ်တာပါ ကွာ..”“ဟင့်အင်း မောင်” ကျမတို့ မိန်းမသား ဘဝမှာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးကိုတော့ လက်မထပ်ရသေးပဲ မပေးဆပ်ပရစေနဲ့လား “မောင်”..တသက်လုံး တန်ဖိုးထားတဲ့ အပျိုစင် ဘဝလေးကိုတော့ မလိုချ င်ပါနဲ့အုံး နော်..”မောင်” ”တောက်စ်..” … Read more
ကျောင်းဆရာ (၂) ဦး ဦးဆောင်ပြီးတော့ လမ်းဘေး၊ တဲထိုး၊ ညအိပ်ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကားလမ်း ဖောက်တဲ့ရွာကလေး
ကျောင်းဆရာ (၂) ဦး ဦးဆောင်ပြီးတော့ လမ်းဘေး၊ တဲထိုး၊ ညအိပ်ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကားလမ်း ဖောက်တဲ့ရွာကလေး ကျောင်းဆရာ ၂ဦး ဦးဆောင်ပြီးတော့ လမ်းဘေး၊ တဲထိုး၊ ညအိပ် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကားလမ်း ဖောက်တဲ့ရွာ လွယ်ပတ်ရွာဟာ အိမ်ရှည်တွေနဲ့ အရမ်းကို သာယာလှပတဲ့ ရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ပြင်ပ ကမ္ဘာတစ်ခုလိုပေါ့။ သူစိမ်းလာရင် ထွက်ပြေးတာကို တန်းနေတာပဲ။ ကားလမ်းမရှိ ဆိုင်ကယ်လမ်းမရှိ။ တောလမ်းဘဲ။ အဲရွာသွားရောက်ဖို့ နာရီများစွာ လမ်းလျှောက်ရတယ်။ အခု အဲရွာမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းစဖွင့်တယ်။ အဲကတည်းက ရွာသားတွေဟာ လူ့ကမ္ဘာထဲ ပြန်ရောက်လာတယ် ပြောရမယ်။ကျောင်းဆရာ ၂ဦးက ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဆိုင်ကယ်လမ်း စဖောက်တယ်။ အဲ့နောက် အဲရွာကို ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ … Read more